Daandiin Kaanaadaa fi Amerikaa Wal Agarsisuu Hangi tokko Cufamuun Yaaddoo Uumee Jira
Guraandhalaa 09, 2022
Kaanaadaa keessatti mormiin shofeerota kokolaataa fe’umsaa itti fufeera.
Shofeeronni kokolaataa fe’umsaa daandii daangaa kaanaadaa fi Yunaaytid istees wal agarsiisuu kan koonkolaataa hedduun irra deemu hanga tokko cufuun isaanii kan isaan yaaddeesse ta’u seera tumtoonni kaanaaadaa ibsanii jiru.
Shoofeeronni kun daandii hang tokko kan cufan dhukkuuba KOOVID 19 ilaalchisee ugguura ka’amee mormuun ta’uun beekamee jira.
Riqiicha Ambaasaaddar jedhamu kan biyyoota lameen giddu jiru irratti kan cufamee yoo ta’u daandiin sun daldala Amerikaa fi Kaanaadaa gidduu hundumaa keessaa harka 25 deddebisuuf gargaara. Mormiin kun naanoo daangaa Kaanaadaa bakka biraattis babal’ataa jira.
Ministeera qophaaiina yeroo hatattamaa kan ta’an Biil Bileeyer gutummaan hojitti deebi’uuf yeroon hin geenye jedhan.Shofeeronni garu hanga talaalii fudhachuun dirqama ta’uun dhaabatuutti akkasumas uggurri biroon ka’aman kaafamanti daandii irraa hin gallu jedhan.
Dubartoota 14 Yeroo ABUT Naannoo Amaaraa Keessa Ture Gudeeddamuu Himatan
Bakka Dur Jiraataa Turreetti Deebi’uuf Waan Tokko Harkaa Hin Qabnu: Jiraattoota Afaar
To’annaa Jala Kanneen Olan Har’a Mana Murtii Duratti Dhiiyaatan
Embaasiin Amerikaa Finfinnee Jiru Yaaddoo Qabu Ibsee Jira
Konkolaatonni Gargaarsa Guddaa Fe'atan Tigiraay Dhaqqabaniyyuu Ammallee Tigiraay fi Naannoo Ishee Keessa Hanqina tu Jira